Iyo MediaLight Pro 6500K CRI 99 Ra Bias Kuvhenekesa Sisitimu - MediaLight Bias Mwenje
musha Iyo MediaLight Pro 6500K CRI 99 Ra Bias Lighting System
Dzvanya kuwedzera Tinya to zoom
Iyo MediaLight Pro 6500K CRI 99 Ra Bias Lighting System
Mutengo wepakutanga $122.95
Mutengo wepakutanga $122.95 - Mutengo wepakutanga $402.95
Mutengo wanhasi $102.95
product.variants.choose_variant MediaLight Pro 20 "(51cm) Strip Shanduro - $ 102.95 MediaLight Pro 20 "(51cm) Rigid" Fixture "Shanduro - $ 112.95 MediaLight Verso Pro 4 Meter (157 inches) Strip (5v USB powered) - $ 332.95 MediaLight Mega Pro 5 mita (197 inches) 12v (kwete USB inoenderana) - $ 382.95
MediaLight Pro 20 "(51cm) Strip Shanduro MediaLight Pro 20 "(51cm) Rigid" Fixture "Shanduro MediaLight Verso Pro 4 Meter (157 inches) Strip (5v USB inofambiswa) MediaLight Mega Pro 5 mita (197 inches) 12v (kwete USB inoenderana) mhando
Share on Facebook Tweet musi Twitter Share musi LinkedIn Pin musi Pinterest
Iyo MediaLight Pro:
Yedu D65 CRI 99 tsvete mwenje wekusingaenzanisike kurongeka uye kuenderana
Ndokumbira utarise: Kana usiri nyanzvi colorist, iwe ungangoda iyo Mk2 Series panzvimbo.
Muchokwadi, kunyangwe iwe uri nyanzvi colorist, mikana ndeyekuti iwe urikutsvaga iyo Mk2 Series. Iwo maMk2 machipisi madiki uye anowedzera simba simba, uye izvi zvinotibvumidza kugadzira matambo akareba pasina anonzwisisika kudonha kwemagetsi Iyo nyowani Mk2 Series inouya inoseka padyo nekuita kwePro kwe1 / 3 yemutengo. Muchokwadi, neTLCI, ivo vaviri vanoyera 99 kubva pa100.
Yedu MediaLight Mk2 akateedzana ane CRI ye ≥98 Ra. Kuita kwakangofanana pakati pePro neMk2, kunyangwe iyo MediaLight Pro inoshandisa iri pedyo-violet emitter. Izvi zvinofambisa iyo photon-emitter spike pazasi peizvo ziso remunhu rinogona kuona (vazhinji vedu, zvakadaro). Iyo yakasara SPD inobata zvinokatyamadza zvakafanana kune D65 zuva rezuva, kusasanganisa infrared mwenje, hongu. Nekudaro, sekune zvese zvigadzirwa zvedu, hatimboti izvo zvigadzirwa zvedu ndeD65. Isu tinoshandisa izwi rekuti "simulated D65" nekuda kwekusiyana kuri pachena pakati pechiedza chezuva nechiedza cheLED.
Pano muna 2020, zvingave zvisiri izvo kudaidza manmade mwenje isingazivikanwe kubva kunezuva. Tinogona kuona makemikari akaumbwa nenyeredzi dziri kure nema spectrophotometers uye isu tinogona kunyatso taura kwezuva kubva kumaturu eLED.
Nei wakagadzira mwenje yeCRI 99 yekutsvetera kuti ingovhenekera rinotaridzika grey kumashure?
1) Nekuti taigona.
2) Nekuti isu tinotenda iko iko iko kwevatengi LED tekinoroji ichave mumakore mashoma.
3) Nekuti kana paine munhu aizozviita kutanga, takafunga kuti zvinogona kunge zviri isu. _ _ (ツ) _ / ¯
Iyo 20-inch MediaLight Pro inoita kwete inosanganisira kure (iyo dimmer iri pane tambo). Zviri kwete inokodzera kuratidzwa kumadziro. Pane kudaro, shandisa MediaLight Verso Pro. Iyo ichiri kumhanya kubva pa5v 1a, USB 3.0. Inosanganisira dimmer uye remote control.
Tekinoroji inofora ichienderera, zvisinei, uye isu tine chokwadi chekuti mukati memwedzi gumi nesere inotevera, zvese zvigadzirwa zvakajairwa zvichave neCRI ingangoita 18 ​​Ra uye TLCI ye98. (Cherekedza kubva ku2020: izvi zvakatoitika neyedu Mk2 mutsara uye zvakatora mwedzi makumi maviri).
The MediaLight Pro yakagadzirirwa macolorist avo vanoda iyo yepamusoro CRI uye yakanyanya yunifomu yekuparadzira simba rekuparadzira muchiedza chekusarudzika kune kwavo kuratidza kwehunyanzvi. The Pro inoshandisa kirasi nyowani nyowani ye RuvaraGrade ™ SMD (LED) machipisi, inofambiswa neinoda-violet mapikicha enjini, uye ine inoshamisa color kupa indekisi (CRI) ye99 Ra (TLCI 99.3 Qa) Iyo MediaLight Pro haina kujeka kubva masikati kusvika kuziso revanhu.
Iyo mhando nyowani nyowani yekusarudzika mwenje, inofambiswa nekirasi zvachose nyowani yeSMD (LED) mwenje.
Ziso revanhu rinonyanya kuona wavelengths pakati pe400-700 nanometer. Iyo spectral simba rekuparadzira curve (SPD) yeiyo MediaLight Pro inoratidza kuti pachinzvimbo chekutaurira nehasha yebhuruu spike inowanikwa mune yechinyakare chena ma LED masisitimu, iyo padhu-violet Photon injini simba rinowira zvakanyanya mune subperceptual renji.
Mazhinji zvigadzirwa zvemwenje mwenje masystem anodonha muR9 neR12 kukosha, ayo asina kuverengerwa muCRI kuverenga, asi anodikanwa pakubereka kwakatendeka kwematehwe eganda uye yakadzika tsvuku. Iwo anowanzo tsiviwa neakawanda anowedzera simba-anoshanda, uye anodhura girini phosphors, iyo inogona kukonzeresa kune greenish ruvara kukanda, kunyangwe kana ichishandiswa kuvhenekera grey pamusoro, senge ndizvo zvinoitika nekusarura kwechiedza. Beyond ye violet injini injini, iyo inobvisa "bhuruu spike," Iyo MediaLight Pro inoshandisa musanganiswa wakasarudzika wemaphosphors anosanganisira aya akakosha matsvuku, zvichikonzera kutsetseka kwakanyanya SPD uye nekuwedzera mwenje wechiedza.
Iine color rendering index (CRI) ye99 Ra (TLCI 99.3 Qa) uye CCT ye6500K, iyo MediaLight Pro ndiyo yepamusoro yepamusoro D65 inoenderana nebias system yekuvhenekesa iripo nhasi.
Iyo compact. Inogona kupihwa simba neUSB 2.0 kana USB 3.0 zviteshi pane yako nyanzvi yekutarisa, uye inodhura 1/3 mutengo weiyo yepamusoro-CRI, bhuruu emitter-based nyanzvi tsvete mwenje izvo zvishoma zvishoma.
MediaLight Pro zvinhu:
6500K CCT (Yakabatana ruvara Kupisa)
CRI 99 Ra (TLCI 99.3 Qa) ColourGrade ™ SMD (LED) machipisi
50 cm inoshanduka mwenje ubvise kana akaomarara aluminium chiteshi shanduro - inokodzera yako 24 "nyanzvi yekutarisisa
Iyo 4m Verso Pro ichaenda yakatenderedza mativi mana e60 "kuratidza, kana kuvhara mativi matatu (kuruboshwe, kumusoro uye kurudyi) kwechiratidziro kusvika 3"
4ft USB yekuwedzera tambo - inogona kupihwa simba kubva kuUSB 2.0 kana USB 3.0 madoko pane yako kuratidza kana komputa
Inosanganisira PWM dimmer
5v USB Simba
Inosanganisira waya yekufambisa zvikamu
Peel uye unamate 3M VHB inonamira inonamira
5 Gore Gore Warranty
4.7 Kubva pane 10 Ongororo
Nyora Review Bvunza mubvunzo
Musoro we Ongororo
Izvo zvaive zvakaitika kwauri zvakadini?
Ndatenda nekutumira wongororo!
Kuisa kwako kunoongwa kwazvo. Igovera iyo neshamwari dzako kuti ivo vagone kunakidzwa nayo!
Iva wekutanga kuongorora chinhu ichi
SortNemifananidzo Most Recent Mukurumbira Mukuru Lowest Rating Zvino Kubatsira
Zvakanaka chaizvo :) Ndatenda :)
MediaLight Verso Pro 4 Meter (157 inches) Strip (5v USB inofambiswa)
mugove | Facebook • Twitter
Akanga anobatsira ichi? 0 0
ipfupi kwazvo nemari zhinji
MediaLight Pro 20 "(51cm) Rigid" Fixture "Shanduro
Akanga anobatsira ichi? 1 3
MediaLight Bias Chiedza
Isu tinopa akawanda akawanda uye anodhura sarudzo neTLCI 99 kana iwe uchida mitsetse mirefu kana mutengo wakaderera. Kureba kweMediaLight Pro 51 cm kunowanikwa mune tsananguro yechigadzirwa uye zita rezvigadzirwa. Iwo maLED anoshandiswa muMediaLight Pro ari pakati peakanyatsojeka maLED akagadzirwa panguva ino saizi (SMD5360), uye iwo anodhura yakawanda kuita. Tine urombo kana iwe wanga usingazive zvawanga uchitenga kana kuti zvakadii.
Inotaridzika zvakanaka. Zvide.
Nyore kumisikidza uye nekukasira kugadzirisa yangu yekugadzirisa setup!
MediaLight Pro 20 "(51cm) Strip Shanduro
Sezvakashambadzirwa. Ini ndinoshandisa iyo kumashure kweangu Dolby 4220 color grading Monitor. Kungopenya zvakakwana kuti ndivhenekere yangu isina kwachena grey kumashure madziro.
Iwe munguva ichangobva kuonekwa
Bvisa ichangobva kuonekwa